Raysal Wasaare Kheyre oo Beledweyne ku sii jeeda iyo loolanka safarka
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku sii jeeda magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan, si ay kormeeraan howlaha gargaarka ee ka socda magaaladaas, kaddib markii kumanaan ruux ay ku barakaceen fatahaadii wabiga Shabelle.
Sida wararku sheegayaan loolan ku aadan safarka Beledweyne ayaa ka dhex bilowday dowladda Federaalka iyo Madasha Xisbiyada Qaran, kaddib markii wafdiga ay hoggaaminayaan Madaxweynayaashii hore loo diiday inay ka dhoofaan garoonka.
Wararka ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo ku sugan yahay garoonka diyaaradaha Muqdisho, isla markaana uu ka dhoofayo dhanka Afisyooni ama Hangarka oo aheyd halkii ay ka dhacday doorashadii Madaxweynaha.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa la sheegay in isaga oo ku soo socday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, gaar ahaan qeybta VIP-da ee ay Madaxda ka dhoofaan ayaa lagu wargeliyay in qeybtaas ku sugan yihiin Madaxweynayaashii hore, waxaana loo maleeyay markii hore in Ra’iisul Wasaaruhu baaqday, hase ahaatee markii dambe la ogaaday inuu u wareegsaday qeybta Afisyooni, si uu halkaas uga duulo.
Loolanka durbaba ka dhashay safarka Beledweyne ee Wafdiga ay kala hoggaaminayaan Madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh, Sheekh Shariif iyo wafdiga uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa soo baxay xalay fiidkii, kaddib markii laga warhelay in labada dhinac ay isu diyaarinayaan safaro ay ku tagaan Beledweyne.